भिम रावल भन्नुहुन्छ – प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी कता हालेछन् ?
काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी कता हालेछन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार धनगढीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रपतिले वित’रण गरेको पदकको त’क्मामा नेपालको नक्सामा समेटिएको भूमि नराखिएको भन्दै आ’पत्ति जनाएका हुन् ।
“लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी कता पु¥र्‍याउनुभएछ प्रधानमन्त्रीले ? उहाँको गृह मन्त्रालयबाट स्प’ष्टीकरण आएको छ । स्प’ष्टीकरण सुन्दा दुःख पनि लागेको छ, आ’श्चर्य बढी लागेको छ ।
गृह मन्त्रालयले भन्छ, तक्मा दिने निर्णय पहिल्यै भएको थियो । सार्वभौ’मसत्ताको अभ्यास गर्ने जनप्रतिनिधिले एक मतले पारित गरेपछि पहिल्यै निर्णय भएकाले नराखिएको भनेर ढाँ’ट्ने ? राष्ट्र’हि’तविपरी’त चिन्त’न ।
कानुनी र राजनीतिक दृ’ष्टिकोणबाट गृह मन्त्रालयको तर्क ग’लत छ,” उनले भने । आफ्नो भूमि समेटेर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि सच्याउनु पर्दैन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
लिपुलेक, लि’म्पियाधुरा, कालापनी नेपालको भूमि होइन भनेर सामान्त गोयलसँग निर्णय गरेको भए आफूहरुलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो । नेता रावलले पार्टीमा का’रबाही भएर आफ्नो पद जाने विषयमा चि’न्ता नरहेको पनि बताए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले वि’धानविप’रीत गरेको भन्दै पदबारे चि’न्ता नलिन उनले आ’ग्रह गरे । “पद कहाँ जान्छ ? के गर्छ ? भन्नेमा चिन्ता छैन । कसैले कसैको पद खान सक्दैन । हामी नेकपा एमालेमा नै छौँ,” उनले भने । -बार्हखरी बाट
२०७७ चैत्र २९, आईतवार २१:२३ गते 1 Minute 514 Views